Afar Sababood Oo Man City Ku Garaaci Doonto Chelsea Iyo Xog Muujinaysa Gol-jilicda Blues | Laacib.net
Afar Sababood Oo Man City Ku Garaaci Doonto Chelsea Iyo Xog Muujinaysa Gol-jilicda Blues
07-12-2018 Abdiwahab A. Abeye Comments Off on Afar Sababood Oo Man City Ku Garaaci Doonto Chelsea Iyo Xog Muujinaysa Gol-jilicda Blues
Kulanka ugu weyn toddobaadkan horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha Chelsea iyo Manchester City, kuwaas oo kuwaas oo maalinta Sabtida ku ballansan garoonka Stamford Bridge ee magaalada London.
Manchester City ayaa toban dhibcood oo nadiif ah ka horreysa Chelsea oo siibatay laba ciyaarood oo guul-darrooyin ay kala kulantay Tottenham iyo Wolves, laakiin waxa badan farqiga goolasha labada kooxood oo ah 38 ay Man City dheer tahay Blues. Shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee ay martida ahayd, kooxda tababare Pep Guardiola waxay dhalisay 12 gool, waana midda walaaca ugu weyn ku haysa shaqaalaha tababarka iyo jamaahiirta Blues.
Marka dhinac kale laga eego, waxay tijaabo u tahay tababaraha Chelsea oo afartiii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee lixda kooxood ee waaweyn ay kaga hor tageen hal kulan oo kaliya guul ka keenay, waxaanay guushaasi ahayd ciyaartii labaad ee bilowga horyaalka Premier League oo Stamford Bridge ay ku garaaceen Arsenal oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada London, hase yeeshee waxay barbar-dhac la galeen Liverpool iyo Manchester United, halka ay Tottenham ku tumatay usbuucii hore.
Chelsea waxa saaran culays weyn marka la barbar-dhigo Manchester City, waxaanay fadhidaa kaalinta afraad oo farqiga goolasha ay kaga sarrayso Arsenal oo shanaad ah balse ay dhibcaha isku mid yihiin. Guul ciyaartan ay ka keento, waxa Blues ay usoo celin doontaaa kalsoonida iyo qaab ciyaareedkii wanaagsanaa ee kulamadii hore ay ku soo bandhigayeen garoomada, haddii se laga adkaado, waxay geli karaan qalalaase iyo kalsooni darro ku dhacda, taas oo ay u dheer tahay inay booska shanaad u degi doonaan haddii Gunners guul keento.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbin doonaa afar arrimood oo Manchester City kaga guuleysan doonto Chelsea oo marka horeba qas ku jirtay.
4. Awoodda weerarka ee City ku burburiso kooxaha
Manchester City waxay ku jirtaa xili ciyaareed cajiib ah, mahaddeedana waxa iska leh weeraryahannada oo dhibaato ku ah koox kasta oo ay ka hor tagaan, isla markaana burburiya difaaca ka hor yimaadda. Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Leroy Sane, Jesus iyo Sergio Aguero waxay iskugeyn dhaliyeen 45 gool xili ciyaareedkan aan weli badhtamaha gaadhin ee horyaalka Premier League.
Kooxda kaliya ee aanay goolal ka dhalinin waa Liverpool oo kulankoodii Premier League ee xili ciyaareedkan ay ku kala baxeen barbar-dhac goolal la’aan ah.
Tababare Pep Guardiola waxay u badan tahay in aanu heli doonin laacibka reer Argentina ee Sergio Aguero oo dhaawac ah, balse waxa diyaar u ah inta kale xiddigaha weerarka ee aynu sare kusoo sheegnay, waxaana hoggaamin doono dhaliyaha reer Brazil ee Gabriel Jesus.
Dhinaca Blues, dhibaatadeeduba waxay ka unkantay afka hore, waxaana jooga Morata iyo Giroud oo iskugeyn dhaliyey lix gool kulamada horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan, waxaana musiibo ah, in wadartoodu ay laba gool ka hooseeyaan tirada goolasha uu dhaliyey Raheem Sterling oo kaliya.
Eden Hazard ayaa badbaadiye u ahaa Blues ciyaaro badan, laakiin shantii kulan ee ugu dambeeyey muu dhalinin wax goolal, taasina waxay u wanaagsan tahay Manchester City oo ku awood badnaan doonta afka hore, ayna u sahlanaan doonto inay goolal dhaliso haddii aanay Chelsea la imanin ciyaar mucjiso ah.
Gurji 2 si aad u akhrido warbixinta oo dhan